(L) အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်သူများဖြစ်လာစေသည် (2016) - Your Brain On Porn
မတ်လ 5, 2016
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရန်လွယ်ကူ access ကိုစိတ်ပျက်စရာအပြုအမူကိုနောက်ကွယ်မှအဓိကအချက်ဖြစ်ဟုဆိုသည်။
ခြောက်နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးသူ့အမိကားမှားတစ်ခုခု twigged ကြောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူ soiling ထားရှိမည်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် - တစ်ဦးအရက်မိခင်နှင့်ပျက်ကွက်ဖခင်နှင့်အတူကိုး 11 အသက် - သူမ၏နည်းနည်းကောင်လေး lollies ပေးခြင်းနှင့်သူ့ကို molesting ခဲ့သညျ။
အဆိုပါအိမ်တွေကိုသွားပြီးမိခင်ဘရစ္စဘိန်းမူလတန်းကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီးသတိပေးသည့်အခါသူမက "အရာအားလုံးထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရဲ့" စိတ်ချပါခဲ့သည်။ သူမသည်ကျောင်းထဲကနေသူမရဲ့သားဖယ်ရှားခဲ့သည်။
နောက်ထပ်မိခင်တစ်ဦးကိုးနှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသူမည်သူမဆိုကိုပြောသည်လျှင် "သူမ၏မျက်စိထွက်လာကြတယ်" ဟုခြိမ်းခြောက်, ပါးစပ်လိင်သို့သူမ၏ငါးနှစ်အရွယ်သမီးအတင်းအကျပ်ဘယ်လို Inquirer ပြောပြသည်။ NSW ရဲတပ်ဖွဲ့ကြောင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အသက် "နည်းပညာပိုင်းအဘယ်သူမျှမရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော" သောမိခင်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသြစတြေးလျကိုဖြတ်ပြီးကလေးက-on-ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများဆီးရီးယားနဲ့အစ်လျှံအဘို့အအပြစ်တင်လျက်ရှိသည်။ တစ်ဦးကလေးယောက်နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဒေသဆိုင်ရာတောင်သြစတြေးလျအတွက်သူငယ်တန်းမှာ "လိင်ဂိမ်း" တွင်အခြားကလေးများတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အခွန်ထမ်းစရိတ်မှာ chaperoned လျက်ရှိသည်။ ဆစ်ဒနီရဲ့အထက်တန်းလွှာသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ Grammar School မှာ, တစ်နှစ်တာ 1 ယောက်ျားလေးများ၏အုပ်စုတစုနှောင်းပိုင်းကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျောင်းအိမ်သာနှင့်ကစားကွင်းအတွင်းလိင်အပြုအမူဖျော်ဖြေရှာတွေ့ခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာကောင်လေးကအင်္ဂလီကန်ကျောင်းကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်နှင့်ရှစ်အကြံပေးခြင်းကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ဆရာဝန်များနှင့်ကလေးအလွဲသုံးစားမှုကျွမ်းကျင်သူများကအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်မတော်တဆ access ကိုအဆိုပါအလွဲသုံးစားမှုမှမကြာခဏမေ့မေ့လျော့လျော့ကျောင်းများနှင့်မိဘများနှင့်အတူ copycat လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်သို့သားသမီးများလှည့်ကြောင်းသတိပေးနေကြသည်။ ကလေးများအကြားညစ်ညမ်းသောစော်ကားမှုများ၏အရေအတွက်ထက်ပို 44 ထံမှ 2005 မှနှစ်ဆစဉ်တစ်ဦးတည်း NSW မှာတော့ကလေးက-on-ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများ၏အရေအတွက် 06-80 အတွက် 2014 မှ 15-33 အတွက် 73 ကနေကြီးပြင်းလာတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားအတိတ်ငါးနှစ်အတွင်းကလေးငယ်များအကြား 1169 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုမှတ်တမ်းတင်ထားသောသိရသည်။
စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးနှင့်လူမှုရေးလုပ်သားတသူသည်သြစတြေးလျကလေးဘဝဖောင်ဒေးရှင်းမှအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဂျိုး Tucci, မိမိအအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းကပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခြောက်ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်ကလေးများကိုဆုံးမနေသည်ကပြောပါတယ်။ "သူတို့ထဲကတချို့ကသူတို့တောင်မှသူတို့ရဲ့ဖိနိပ်ကြိုးချည်နှောင်လို့မရဘူး, ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်နေကြတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူ့အဖွဲ့အစည်းမဲလ်ဘုန်းရဲ့အရှေ့ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးကနေ 200 ကလေးများကူညီ; ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာကတစ်နှစ်ရည်ညွှန်း 10 မှ 15 ဆက်ဆံ။ Tucci အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းမှသားသမီးရဲ့ထိတွေ့မှုက "ချမှတ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း" ဖြစ်ပြီး, ခုနစျပါး၏အသက်အရွယ်ကနေလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုစကားပြောကိုစတင်မိဘများအကြံပေးယုံကြည်သည်။
"မသာအရေအတွက်တိုးဒါပေမယ့်လည်းအပြုအမူ၏လေးနက်မှုကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်" ဟု Tucci Inquirer ပြောပြသည်။
"ဒီများစွာသောထုတ်လုပ်ကြောင်းဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေညစ်ညမ်းစေရန်တိုးမြှင့်ရရှိမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်နည်းပညာမြင်ရနိုင်မှမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အတူကလေးတိုင်း enabled သိရသည်။
"တစ်ခါတလေသူတို့ကဖြီးလိမ်းပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လူကြီးများအားဖြင့် (ထို porn) ကိုပြသနေ, ကဒါမရရှိနိုင်ပါနှင့်လက်လှမ်းမယ့်လို့တခါတရံသူတို့ကရွယ်တူနှင့်အထက်မောင်နှမများကပြသနေနှင့်တခါတရံသူတို့ကဖြတ်ပြီးထိ မိ. လဲစရာပါတယ်။ "
Tucci အများကြီးအွန်လိုင်း porn တခါတရံအုပ်စုများအတွက်, အမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ယောက်ျားကပါဝင်ပတ်သက်လို့ပြောပါတယ်။ "ဒါဟာရငျးနှီးတစ်ခုခေါင်းပုံဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဒါဟာသတိထားနဲ့သတိထားနှင့်လေးစားမှုမဟုတ်ပါဘူး။
"ဒါဟာရငျးနှီးမှုနှငျ့လူငယျတဲ့ပုံစံခြားနားချက်မပြောနိုင်ကျူးကျော်အောင်ရဲ့။ သင်မြင်သောအရာတို့ကိုပြုလေ၏လျှင်, သင်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖွင့်လိုကထိခိုက်စေလိမ့်မယ်။ "
မဖော်ပြသည့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို - - ရန်လိုလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကနေရရှိလာတဲ့ဆရာဝန်များရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာများအားဖြင့်အုတ်အုတ်သဲသဲနေကြသည်။ သြစတြေးလျ Medical Association ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစတီဖင် Parnis ဆရာဝန်တွေ, မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်အဘို့မိမိတို့နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်မှာသူတို့ကိုလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်စအို-လိင်အင်္ဂါဒဏ်ရာအဖြစ်လုလင်တို့သည် "အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု" ပိုပြီးမိန်းကလေးငယ်များကုသနေကြသည်ဟုဆိုသည်။
"ညစ်ညမ်း၏ရရှိမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားတစ်ခုလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုတိုးခြင်းနှင့်စံမဟုတ်သည့်အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ရှိခဲ့ရဲ့" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာငယ်ရွယ်သြစတြေးလျမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့၏။ " သူတို့ကသာမန်ဖြစ်တယ်ထင်နှင့်တစ်ဦး "ကောင်းသောရည်းစား" ဖွစျခငျြသောကွောငျ့မိန်းကလေးအများစုကသူကပြောပါတယ်လိုက်လျော။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ကို့ရေးစင်တာမှာဒါရိုက်တာ Di Macleod အစာအိမ်-churning လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာနှင့်အတူအမျိုးသမီးငယ်၏တိုးပွားလာနံပါတ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု 1990 စတင်ခဲ့သည့်အခါအမျိုးသမီးများသည်ရာခိုင်နှုန်းသာ2ရငျးနှီးဖက်ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၏သားကောင်များဖြစ်ကြပြီ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြုလုပ်ရာခိုင်နှုန်း 18 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကူအညီရှာကြံအမျိုးသမီးတွေအရေအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 113 မှ 1990 အတွက် 3079 ထံမှမြင့်တက်ခဲ့သည်။ "အပြင် non-ကြည်ကြည်လိင်လုပ်ရပ်၏သဘောသဘာဝကနေကျနော်တို့ကိုဆင်းကျင်းပနှင့်ဆို့ခံကဲ့သို့အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာများကိုမြင်လျှင်ပါတယ်," Macleod Inquirer ပြောပြသည်။ "ကျနော်တို့ကသူတို့မြင်ကြပြီအဘယျသို့ထွက်ပြုမူလိုသောအလွန်ငယ်ရွယ်လူတို့တွင်ဒီအပြုအမူကိုမြင်လျှင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်ကြောင်းလုပ်ဖို့လိုကြသည်မဟုတ်နှင့်များစွာသောကိစ္စများတွင်ထိုသို့ပြုမှဖိအားပေးလျက်ရှိသည်။ လူငယ်များအရာအားလုံးထက်၏မရှိခြင်းအတွက်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနေသည် - ကျနော်တို့အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေများ၏အော့ဖ်လိုင်းဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော်ငါတို့သည်အဘယ်သို့အင်တာနက်ရာခိုင်နှုန်း 36 လွှဲပြောင်းယူမယ့်အရာတစ်ခုခုတန်ပြန်သလဲ? "
စမတ်ဖုန်း - သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မိဘများကသားသမီးများအားပေးပြီးမှ - အင်တာနက်သတ်မရှိလုပ်ပိုင် access ကိုပေးနေကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာစမတ်ဖုန်းရှိသည် ဖြစ်. , 2011 အတွက်ကိန်းဂဏန်းရာခိုင်နှုန်း 25 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏သုံးပုံနှစ်ပုံရာခိုင်နှုန်းဗီဒီယိုနှင့် 28 စီးဆင်းရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုဖို့ 10pm နှင့်သန်းခေါင်အကြားအွန်လိုင်းဖြစ်ကြသည်။
သူမ၏ဆိုက်ဘာလုံခြုံမှု Solutions ကုမ္ပဏီတည်ထောင်မတိုင်မီ 27 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦး "ဆိုက်ဘာရဲ" အဖြစ်ဗစ်တိုးရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်သူအဆူ McLean, များလွန်းမိဘများကလေးတွေအင်တာနက်ကိုမရှိသောနှင့် unsupervised access ကိုပေးကမ်းခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုမေ့မေ့လျော့လျော့နေကြသည်ဟုဆိုသည်။
"ငါသည် '' ဆရာဝန်များနှင့်သူနာပြုများ '' တူးဖော်ရေးထက် သာ. ပါဝငျသူနည်းနည်းလေးတွေနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ခေါ်လာတာ" ဟုသူမက Inquirer ပြောပြသည်။ သူတို့ညစ်ညမ်းကနေတဆင့်ထိတွေ့နေ, သို့မဟုတ်ပါကသူတို့အပြုခံခဲ့ရရဲ့: "သူတို့ကဒီလမ်းပြုမူသာအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ညစ်ညမ်းလေးတွေကစောင့်ကြည့်နေကြသည်နှင့်အရှိဆုံးမိဘများတဲ့သဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ခရီးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းများတက်ကြွသောဖြစ်ခြင်းကြသည်မဟုတ်။ "
အမျိုးသားကလေးများကော်မရှင်နာ Megan Mitchell ကကလေးအတော်များများ "မတော်တဆညစ်ညမ်းဖြတ်ပြီးလာက" သတိပေးလိုက်သည်။ "ဒါဟာအချို့ကလေးများလိင်နှင့်လိင်အကြောင်းကိုလာပြီဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းသောပညာရေးပါပဲ" ဟုသူမကဆိုသည်။ "သူတို့ကလိင်ဆက်ဆံရေးနှင့်ရငျးနှီးအကြောင်းကိုလည်းကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြသည်မဟုတ်။ "
Mitchell ကမိဘများအင်တာနက်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေ '' အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသတိရှိရမည်ပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း "ကျောင်းများနှင့်အခြားသူများကိုအာကာသသို့ခြေလှမ်းရန်ရှိသည်" ။ "ကျနော်တို့ကဒီသွားမယ့်ဟန်ဆောင်ဆက်လက်မရဘူး" ဟုသူမကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကဒီပစ္စည်းပစ္စယများ၏ထိပ်ပေါ်မှာရဖို့ရှိသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက် (အင်တာနက်) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု filter များနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြောင်းကောင်းသောလိင်ပညာရေးကို အသုံးပြု. ပေါင်းစပ်ဖြစ်တယ်သိရပါတယ်။ "
ညစ်ညမ်းရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်မတော်တဆ access ကိုအိမ်မှာနှင့်ကျောင်းမှာသူတို့ရဲ့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူသားသမီးရဲ့အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုစောင့်ကြည့်ဖို့ရုန်းကန်နေကြသူမိဘများကစိုးရိမ်မဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအထောက်ပံ့ကို Safe ကျောင်းများညွန့်ပေါင်း - လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်ကျောင်းသားများအတွက် anti-နိုင်ကျင့်အစီအစဉ်ကို - ကျောင်းသားများကိုအခြားအခွန်ထမ်း-ထောက်ပံ့က်ဘ်ဆိုက်ကနေသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာသောသူတို့အကြံပြု, အနုတ်လိင်တူချစ်သူဆယ်ကျော်သက်များအတွက်လိင်သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးသော 18 ။
အနုတ် "အသုံးဝင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ" ၏ 18 ရဲ့စာရင်းတစ်ခုလိင်ဆိုင်ဖို့ link တစ်ခုက The Tool ကိုသွန်းလောင်းနှင့် Scarleteen "ဟုအဆိုပါအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးအတွက်လိင် ed" ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဆယ်ကျော်သက်ရည်ရွယ် website တစ်ခုပါဝင်သည်။ အဆိုပါလင့်များပြီးနောက်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည် သြစတြေးလျ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၎င်းတို့၏တည်ရှိမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဆိုပါအနုတ် 18 က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းအင်တာနက်ရှာဖွေရေးသမိုင်းနဲ့ဖျက်ခြင်းအပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ပေးသော "သင်၏အပုဒ်အဖုံးဖုံး" အမည်ရဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်, ပါဝင်သည်။
ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ကလေးများ eSafety ကော်မရှင်နာ, Alastair MacGibbon, အွန်လိုင်းရာဇဝတ်မှုအတွက်အထူးပြုဟောင်းတစ်ဦးသြစတြေးလျဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ, ညစ်ညမ်းကူးစက်တတ်သူကပြောပါတယ်။ သူကသူတို့အိမ်မှာညစ်ညမ်းထိတွေ့မီကျောင်းမှာသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများက '' အိမ်များမှာ၎င်းတို့၏ကလေးများနှင့်အတူ "လိင်အကြောင်းပြောဆို" ကိုမိဘများကွံတျော။
"ဒီအဖြစ်မှန်တစ်ဦးရွယ်တူအုပ်စုတွင်တဦးတည်းကလေးသည်ပစ္စည်း၏ဒီ type ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ် shared မည်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
"ဒီအရေးအပါဆုံးကိစ္စမိဘများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလူကြီးများကိုသူတို့မကျင့်လျှင်, Google ကလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုသင်ပေးဖို့သွားနေသောကြောင့်, တစ်ဦးလေးစားမှုကြားဆက်ဆံရေးသည်အဘယ်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတွေစကားပြောခံရဖို့အတှကျတကယ်ဖြစ်ပါသည် - ။ နှင့်ကျန်းမာမယ့်"
Tucci အကြံပေးခြင်းများအတွက်သြစတြေးလျကလေးဘဝဖောင်ဒေးရှင်းမှရည်ညွှန်းအမြိုးသားတို့အများဆုံးမိသားစုအကြမ်းဖက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အနိုင်ကျင့်ထိတွေ့ခံတော်မူပြီးမှ, အားနည်းချက်ကပြောပါတယ်။
"babyish အားနည်းချက်ကလေးတွေကိုဂျက်လောင်စာဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "တချို့ကလေးတွေနှစ်သိမ့်-ရှာတဲ့ပုံစံကိုပြုလုပ်လုပ်နေတာ။ တစ်ခုနစ်ခုသို့မဟုတ်ရှစ်နှစ်အရွယ်များအတွက်ကသူတို့ကိုအချို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်နှင့်အချို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရဖို့, ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်တွေအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နေခံစားရရန်အဘို့အလမ်းပါပဲ။ "
ကုထုံးများတွင်ကလေးငယ်များလေးစားမှု sex အကြောင်းဆုံးမသွန်သင်ကြသည်။ "ကျနော်တို့ကအဲဒါကိုနှိပ်စက်တာ, ကလက်တွေ့မယ့်စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ဘူး, ထိုအင်အားစုများနှင့်အကျပ်ကိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့ဖြစ်လတံ့သောအရာကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သူတို့ကိုပြသ," Tucci ကပြောပါတယ်။
သည်အခြားကလေးတွေကိုဗလက္သူကလေးများအနက်လေးယောက်ထဲကသုံးယောက်ယောက်ျားလေးများဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့် Tucci ကျူးလွန်သူအဖြစ်သူတို့ကိုရည်ညွှန်းဘူး။ "သူတို့ကနေဆဲကလေးများနှင့်သူတို့ဘာတွေငါတို့မှမလိုအပ်ပါပဲနှင့်ရပ်ရွာအရှက်ကွဲခြင်းမဟုတ်ဘူး" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဘာကိုသူတို့လိုအပျသသနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်နားလည်မှုနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်၏။ "
30 နှစ်ပေါင်းကလေးကဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပေါ်ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများ, ရဲနှင့်ဘုရားကျောင်းအုပ်စုများအကြံပြုခဲ့သူတောင်ပိုင်းသြစတြေးလျတက္ကသိုလ်ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ Freda Briggs, ကလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုပညာတတ်များကြားတွင် "မညီကြောင်း" ဖြစ်နေဆဲလို့ပြောပါတယ်။ မကြာခဏသားကောင်များသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်နေဖို့စဉ်, "သာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်" သို့မဟုတ်အဖြစ်ပယ်ချ၎င်းတို့၏အပြုအမူ "ယောက်ျားလေးများယောက်ျားလေးများဖြစ်လိမ့်မည်" စာသင်ကျောင်းကနေဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။
"ဒီပြဿနာကမဆရာများ, ရဲမဟုတ်သလိုလူမှုရေးလုပ်သားများအလေးအနက်ထားသည်ဤအပြုအမူကို ယူ. သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခံရဖို့ပေါ်လာကြောင်း, ဖြစ်ပါတယ်" Briggs ကလေးများအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုသို့အထက်လွှတ်တော်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သို့ပြောသည်။ "ကျေနပ်ဖွယ်ကလေးအ-on-ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုကိုင်တွယ်ရန်ပျက်ကွက်များသောအားဖြင့်သားကောင်များ copycat ဖြစ်လာအဖြစ်ပြဿနာများတိုးပွားစေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါအပြုအမူတိုးနှင့်သူတို့ကအတူသောတန်ခိုးတော်ကိုခံစားတဲ့အခါမှာလေ့ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ "
Briggs - UniSA မှာကလေးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကုလားထိုင်ရရှိထားသူသူကိုသြစတြေးလျ၏အမိန့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး - သြစတြေးလျတောင်ပိုင်းသူငယ်တန်းကိစ္စတွင် "တခြားနေရာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို၏ပုံမှန်" ကပြောပါတယ်။ "ကျောင်းများမိဘများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်စာရင်းသွင်းတစ်လျှော့ချရေးကိုရှောင်ရှားဖို့ကော်ဇောအောက်မှာပြဿနာကိုတွန်းထုတ်တဲ့ဖို့ကြိုးစား" ဟုသူမကအဆိုပါစုံစမ်းရေးကော်မရှင်သို့ပြောသည်။
သူမ၏တင်သွင်းခဲ့တဲ့အတန်းဖော်များကကလေးများအပေါ်ကှေဲဖှယျတိုက်ခိုက်မှုအချို့ lists - ကျောင်း cubbyhouse အတွက်သူငယ်တန်းယောက်ျားလေးများအပေါ်ပါးစပ်လိင်အတင်းအကျပ်သူတစ်ဦးသည်ခြောက်နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးအပါအဝင်, နှင့်အိမ်သာသို့ငါးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနောက်တော်သို့လိုက်သူကိုယောက်ျားလေးများ၏အုပ်စုတစု သူမ၏ဆင်းကျင်းပကာ "ရွှေရေချိုးခန်း" တွင်ပေါ့။
သြစတြေးလျသုတေသနကောင်စီလေ့လာမှုအဘို့အဦးထက်ပို 700 ကလေးများနှင့်အတူသူမ၏အင်တာဗျူးမှာတော့ Briggs သူတို့ပျော်စရာအဘို့မိမိတို့မိဘများနှင့်အတူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာသူတို့ကိုမေးတယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, ခြောက်လမှရှစ်အသက်တချို့ယောက်ျားလေးတွေသူတို့အဖေနှင့်အတူအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း watched သူမ၏ပြောသည် - "ကြောင်းယောက်ျားတွေအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုရဲ့" လို့ပဲ။
"သူတို့သာ deviant လူကြီးများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကလေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်စဉ်းစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘများအန္တရာယ်များကိုသတိပြုမိနေကြသည်မဟုတ်," Briggs Inquirer ပြောပြသည်။ "သွန်သင်ပညာရှင်များလုံလောက်စွာသူတို့ရဲ့ Pre-service ကိုတက္ကသိုလ်သင်တန်းများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြပုံမပေါ်ပါဘူးကြောင့်ပညာရေးဌာနများန်ထမ်းလေ့ကျင့်ပေးဖို့များအတွက်အကြီးအကျယ်အလုပ်ပါပဲ။ "
MacGibbon, အ eSafety ကော်မရှင်နာ, မိဘ "ထ step" နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း, ထိုကဲ့သို့သော iPod, iPad, ကွန်ပျူတာနှင့်စမတ်ဖုန်းများအဖြစ်ကိရိယာများပေါ်တွင် filter များတပ်ဆင်ရန်လိုသည်။ ဒီ "မနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာသို့သော်လူမှုရေးပြဿနာ" ဖြစ်ပါသည်သော်လည်းသူသည်အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
"ဒါဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အဆင်မပြေပြောဆိုမှုများရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလိုတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအကြောင်းပြောဆိုမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေချခွင့်ပါတယ်။ "